Gaambeelaatti namoonni meeshaa waraanaa dadabarsaa jiran to'ataman - BBC News Afaan Oromoo
Gaambeelaatti namoonni meeshaa waraanaa dadabarsaa jiran to'ataman
Madda suuraa, Fana Broadcasting Facebook
Namoonni meeshaa waranaa konkolaataa dhunfaafi motummaatti fe'uun dadabarsan to'annaa jala olfamusaanii Komishinarri Polisiin Naannoo Gambeelaa BBC'tti himan.
Meeshaalee seeraan alaa kunneen kan qabaman osoo konkolaataa dhuunfaa fi motummaatti fe'amuun dadabarfamanuu kan jedhan Komishinarri Opiiyaangi Ochaangi, mucaa konkolaataa dhiqaa ture beekkamtii konkolaachisaa malee fudhatee deemuu isaa hima.
Biiroo Dhimmoota nageenyaafi tasgabbii Naannichatti itti gaafatamaa itti aanaan damee nageenyaa Obbo Otaawoo Okoot gama isaanitiin, kilaashii 12 fi xiyyiitiin 471 to'annaa jala olfamu mirkanneessaniiru.
Itti dabalunis Obbo Otaawoon konkolaaticha qabatee kan ture konkolaachisaa Af-yaa'ii naannichaa tures jedhaniiru.
Namni konkolaataa motummaa konkolaachisaa tures beekamtii itti gaafatamaa malee alkan keessaa sa'aatii lamarratti konkolaataa qabatee bahuun isaa himuun, konkolaataan dhuunfaa garuu galgala keessaa naannoo sa'aatii 12'tti qabamu hima.
Akka komishinarri naannichaa himettis, shakkamtoonni kunneen alkan guyyaa Wiixataa Muddee 23, 2019 to'annoo jala olfamu saanii hima.
Bakki meeshaan waraanaafi xiyyitiin to'annoo jala itti olfaman keellaa naannoo Itaangi irratti ta'u kan dubbatan Obbo Otaawoon, hanga ammaatti namoonni sadii to'annoo jala olfamusaanii hubachisaniiru.
Qorannoon shakkamtootaas adeemsarra kan jiru ta'u Komishinarrichi dubbatanii, qorannoon barbaachisuus akkuma xumurameen himannaan kan irratti banamu ta'u himan.
Baatiiwwan sadan darban keeeessa qofaatti naannoo Gambeelaa keessatti meeshaaleen seeraan alaa 47 gara naannichaatti yoo seenan to'atamusaanii kan himan Obbo Otaawoon, kanneen amma to'atam waliin kilaashii 59 qabamu himu.
Meeshaalee seeraan alla kunneenis kan gara naannichaatti dabarfaman Suudaan Kibbaa irraa ta'u Komishinarri kun himaniiru.
Itoophiyaatti magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee dabalatee dadabarsi meeshaalee waraanaa dabalaa dhufuusaa fi humnootiin nageenyaas meeshaa hedduu to'ataa jiraachuu yeroo adda addaatti gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ji'oota sadii darbanitti dhaabbileen 16 to'annoo seeraa jala oolan
'Guyyaa filannootti haalli nageenyaa yaadessaa ta'e nu mudata jennee hin yaadnu'
Shawaa Lixaatti hojjettoonni ijaarsa daandii sagal 'hidhattootaan ajjeefaman'
Namoota ajjeechaa aanga'oota naannoo Amaaraatiin shakkamanirratti murteen darbe
Dubartoonni viidiyoonsaanii beekkamtiisaaniin ala marsariitii saal-qunnamtiirratti bahe himatan banan
Uefa'n qaruuraa dhugaatii ofduraa kaasuun adabbiif saaxila jechuun akeekkachiise
Kiim Jong-un US waliin 'mari'achuu fi dura dhaabbachuuf' qophiidha jedhan
Turistii bakka bultii keessummaa keessatti gudeedamteef beenyaan dolaarri miliyoona 7 kaffalameef
Namichi daa'ima bishaanirra gatamte argee baraare guddoo jajamaa jira
Magaalaa Finfinnee dirree walmorkii ijoo filannoo - 2021
Obbo Jawaarfaan 'sababa filannoon' mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafan